Carlos: Erigii Ancelotti Khalad Ayuu ahaa Laakiin Benitez waa beddel Fiican
HomeWararka MaantaCarlos: Erigii Ancelotti Khalad Ayuu ahaa Laakiin Benitez waa beddel Fiican
15/06/2015 Abdiwahab Ahmed
Difaacii hore ee xulka qaranka Brazil iyo Real Madrid ee Roberto Carlos ayaa aaminsan in ay Real Madrid khalad samaysay markii ay shaqada ka eriday Carlo Ancelotti saddex toddobaad ka hor, hase yeeshee ninka lagu beddelay ee Benitez uu yahay macallin fiican oo beddel wanaagsan ah.
Carlos waxa uu sheegay in madaxweynaha Real Madrid, Florentino Perez uu khaldamay markii uu shaqada ka eryey Carlo Ancelotti, laakiin aakhirkii uu soo xushay Rafael Benitez oo ah tababare khibrad badan oo halkii ka sii wadi karaya horumarkii uu Ancelotti gaadhsiiyey Los Blancos.
Ancelotti ayaa yimid Santiago Bernabeu xagaagii 2013 waxanu kula guuleysay sannadkiisii koowaadba Copa del Rey iyo Champions League, hase ahaatee sannadkii xigay ayay faro madhnaan ku dhamaysatay, taas oo uu Perez kaga jawaabay in uu shaqada ka caydhiyo.
Benitez oo xirfaddiisa tababare ka bilaabay caasimadda Spain ee Madrid, ayaa markiiba loo magacaabay in uu noqdo beddelka Ancelotti, waxaana uu Roberto Carlos aaminsan yahay in macallinkan hore ee Liverpool uu yahay nin ku habboon shaqadaas.
“Kuma raacsani in shaqada laga eriyey Carlo Ancelotti, si la mid ah sidii aanan ugu raacsanayn markii la eryayey Vicente del Bosque iyo Jupp Heynckes.” Sidaas ayuu yidhi Roberto Carlos oo u warramay wargeyska Marca.
“Waa in loo ogolaado tababareyaasha in ay shaqadooda qabsadaan, laakiin waa go’aan uu qaadhay Florentino oo talada haya.
“Benitez wakhti fiican oo xirfaddiisa tababarenimo ayuu leeyahay, wax fiicanna wuu ka qaban karaa Real Madrid. Waa dookh wanaagsan; waa tababare wanaagsan oo yaqaanna xaaladaha kooxda gudaheeda iyo dibeddeeda ka jira. Wanaag ayaan u rajaynayaa, shaqo fuduna maaha.” Ayuu raaciyey Carlos.
Roberto Carlos waxa uu sheegay in dhaqanka Real Madrid ay ka mid tahay in mar kasta ay wax ku guuleysato, haddii ay taasi dhici weydana loo arko in ay mushkilad weyni jirto.
“Arrintani Real Madrid oo kaliya kama jirto, laakiin kooxaha waaweyn sida Chelsea, Barcelona, Manchester United iyo City way la wadaagaan.”ayuu ku daray.
Ugu dambayn, Roberto Carlos waxa uu amaanay weeraryahanka Gareth Bale oo uu ku tilmaamay ciyaartoy wanaagsan oo shaqo fiicanna u qabtay Real Madrid.
‘De Bruyne Waa Dhexda Ugu Wanaagsan Qaaradda Yurub’ – Halyeygii City ee Paul Dickov
Morata Oo Shuruud Ku Xidhay Ku Biiridda Arsenal
17/06/2016 Abdiwahab Ahmed